Chiitiko cheVatengi - Inotevera Supply Chain
Pooch Shamwari Kupa Kutanga, ndakasangana nechigadzirwa ichi zvisina kurongeka uye ini ndaisakwanisa kufara zvakanyanya zvandakaita! dai ndaona izvi nekukurumidza, zvingadai zvakandichengetera nguva yakawanda. Yadzo chigadzirwa renji yakanaka, ipa yakasarudzika tepi yekutumira uye mabhokisi ekukubatsira iwe kuvaka yako mhando, nezvimwewo yavo yemahara chirongwa inopa yekutanga-nguva kudonhedza vanotakura chirongwa CHIKURU uko iwe unogona kuwedzera chiuru zvigadzirwa! Iyo yekuendesa nguva kuUS ingangoita mazuva 5-9, ayo akanaka chaizvo achienzaniswa neAliexpress nemamwe makambani. Ndakawana mukana wekushandisa yavo mhenyu kutaura uko chero kunetsekana kwandakanga ndagadziriswa uye kwakagadziridzwa pane avo marongero eapp yavo uye nemabatiro avari kuedza kugadzirisa, pamwe nenguva iyo nguva yavo yekuvandudzwa ichave ichiitika. Kana uchitaura neanotaura mumiriri dzimwe nguva kuri kungopindura mibvunzo yako uye hakunyatsoita sevanhu havaite senge vane hanya nazvo zvakanyanya asi vachitaurirana navo, unogona kutaura kuti VANONYANYA vane hanya nevatengi vavo! Ini ndakasiya yangu yekutaurirana ndichifara uye ndakakurudzirwa kuti ndirambe ndichienda nechitoro changu uye ndichida kwazvo kuivhura asap !! Zvakanyanya kukurudzira!
amourvere Ini ndiri mutsva mukutumira maodha kuchitoro changu. NextsChain yakakwira seyese yekufambisa sevhisi. Sezvo ini ndanga ndisina chokwadi chekuita, ini ndaishandisa Chat bhokisi kutaura nemubatsiri uye ane ruzivo mubatsiri uyo akatsanangura sevhisi kwandiri. Ndakavimbiswa kuti kutumira kwacho kunokurumidza uye nehanya. Nextschain anga atove nerangu chigadzirwa ruzivo rwakagadzirira ini. Ndinoyemura kukoshesa kwavanopa kune zvakadzama, izvo zvinondiponesa nguva. Martinez
ThePretty.me Zvinoshamisa Great Shipping Service. Kure zvirinani kupfuura ese ekutsvagisa uye kutumira maapplication andakashandisa. Kutenda nemabasa akanaka uye nekuita kudonha kuri nani.
Yakanaka iwe Zvakanaka kana iwe uri kutsvaga kutanga kudonhedza iyi 2020 usatarise kwakatenderedza iwe uri munzvimbo chaipo, Nextchain ine rutsigiro uye zvese zvishandiso kwauri kuti ubudirire kana iwe uine chero dambudziko ivo vatengi vavo masevhisi ingori mashoma mashoma kuti ubatsire iwe uye gadzirisa uye gadzirisa dambudziko rako. Nextchain ndicho chibvumirano.
Waini uye Kofi anoda Ndanga ndichishandisa iyi purogiramu kwemwedzi uye ikozvino ndoenda kuApp yechitoro changu. Ini ndawana zvigadzirwa pano zvandisingakwanise kuwana pane mamwe mapurogiramu ekuzadzikisa. Ini handidi kushandisa oberlo uye kushandisa aliexpress nekuti nguva dzekutakura dzinotyisa uye unofanirwa kubata nemiriyoni vatengesi vakasiyana. Nextschain anotarisira zvese. Iwe unowana odha uye unobhadhara iyo yakawanda uye ivo vanorongedza uye vanotumira chigadzirwa uye vanotumira ngarava yekusimbisa email. Ukasangana nematambudziko chero api anodzokera kwauri ndokugadzirisa. Mune mawonero angu ichi ndicho chakanakisa kuzadzikisa app yevanodonhedza ndege.
OM Mufashoni Boutique Ndiri kufara kwazvo neNextschain.
Zvizhinji zvezvigadzirwa zvekutora kubva uye yakakura zvipfeko sevhisi.
Ndakanga ndine nyaya uye vakandibatsira ipapo ipapo ndokundigadzirira ini.
Ndatenda zvikuru NextsChain.
Acoti 1 Ndakave neapp iyi kweinenge mwedzi miviri ndisati ndanyora ongororo iyi. Kune dzakawanda wongororo dzakapihwa pazuva rekutanga rekushandisa. Ichi chikuru Anwendung. Ini ndapedza sampuro odha iyo yakatumirwa chaizvo kune nguva sezvakataurwa. Ini ndapinza inosvika zana nemakumi mashanu zvigadzirwa zvine budiriro. Ndakafonera rutsigiro kanokwana kuita mashanu nemhinduro inowirirana nguva dzese. Ndingakurudzira zvikuru iyi purogiramu kune ani zvake. Kutenda zvakanyanya NextsChain!
ndiri kuwedzera kuongororo iyi. Ini ndoda kuzivisa munhu wese ruzivo rwangu rwechokwadi neNextschain. Kutanga kubva ini handisi hombe nguva chitoro Asi! Handisati ndambove nedambudziko rekugadzirisa odha dzangu neNextschain. Unofanirwa kuverenga mazwi ake ekushandisa uye uone kana iwe ukashandisa Aliexpress kumasevhisi ako zvinotora nguva yakareba kutumira! Saka kana iwe uchida kutumira nekukurumidza CHETE SHANDISA NextsChain kuzadzikiswa. Handisati ndambove nedambudziko rekugadzirisa mirairo yangu. Uye chikuru pane zvese is !!! Ini ndaive nemutengi nzvimbo odha muna Zvita wa12. Ndakanga ndichitya zvikuru nezvazvo. WOW yakasvika kumutengi mumazuva gumi nerimwe kubva pakuisa odha. Yaive iripo panguva yeKisimusi uye mutengi uye ini ndakafara chose. Kutenda zvakanyanya NextsChain. Basa revatengi rakakura! 10 nyeredzi.
Vegan Apple Tarisa Mabhendi Ini ndakasarudza iyi app nekuti ini ndaida kupa vatengi kukurumidza kutumira kuUK (uye pamwe pasirese, pakupedzisira) sezvo 20-40 zuva rekutumira nguva kubva kune vamwe vatengesi yakawandisa. Ini ndine chaiyo niche yechigadzirwa niche, saka ndanga ndichinetsekana kuti sarudzo dzangu dzichava shoma, asi pane zvakawanda. Ndine zvigadzirwa zvinopfuura zana nemakumi matanhatu zvakamirira kupinzwa kunze kwenyika, uye zvese zvinotaridzika kunge zvakanaka. Mazita echigadzirwa akanaka uye akajeka, mitengo inonzwisisika yekudonhedza etc. handisati ndagamuchira odha kuburikidza navo (ini ndichangotanga) saka handina chokwadi chekuti zvese zvichashandira mutengi zvakadaro, asi maitiro uye ruzivo kusvika ikozvino rwakave rwakakura.
Basa revatengi zvakare rakasarudzika. Ivo vane hunhu uye vanobatsira, uye tora nguva yekutaura newe uye upindure mibvunzo yako. Super inopindura. Ndafadzwa chaizvo kusvika zvino!
Cartersgoods Iyi Anwendung mutambo wekuchinja zvigadzirwa zvikuru nguva dzekutakura uye huru mitengo kamuri kuti uwane purofiti revatengi reps ndiyo yakanakisa yandakamboita nayo ndakamhanyira mune imwe nyaya uye yakagadziriswa mukati meyakafanira nguva imwecheteyo zuva. Great app. Mosts yezvinhu kutumirwa mahara